राज्यसँग चामल माग्न हुम्लाबाट काठमाडौंतिर - Sano Aawaj
राज्यसँग चामल माग्न हुम्लाबाट काठमाडौंतिर
६ मंसिर २०७८, सोमबार by sanoaawaj
आलु र उवा मात्रै उत्पादन हुने चीनसँग जोडिएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा भोकमरी हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा चामल खोज्दै काठमाडौं आउँदै छन् । पाँच हजार मिटर अग्लो न्यालुलेक पहाडमा तीन फिट जमेको हिउँमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै उनीहरू पाँच दिन हिँडेर शनिबार सदरमुकाम सिमकोट पुगेका छन् ।
तस्बिरमा देखिएको लस्कर हिमाल आरोहीहरूको होइन, गाउँमा भोकमरी हुने भएपछि राज्यसँग चामल माग्न हिँडेका हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ लिमीका बासिन्दाको हो । आलु र उवा मात्रै उत्पादन हुने चीनसँग जोडिएको यो गाउँका बासिन्दा पाँच हजार मिटर अग्लो न्यालुलेक पहाडमा तीन फिट जमेको हिउँमा पाँच दिन हिँडेर शनिबार सदरमुकाम सिमकोट पुगेका छन् । ‘जिल्लामै चामल छैन’ भन्ने हुम्लाका सिडिओको जवाफले थप निराश बनेका उनीहरू सिंहदरबारलाई गुहार्न सोमबार काठमाडौं आउँदै छन् ।
लिमीका तीन गाउँ तिल, जाङ र हल्जीमा गत वर्षदेखि राज्यले चामल पठाएको छैन । स्थानीय उत्पादन आलु र उवाले दुई–तीन महिना मात्र धान्छ । चीनबाट हिल्सा नाका हुँदै मैदा ल्याएर पनि स्थानीयले जीवन चलाउँथे । तर, कोरोना महामारीका कारण नाका बन्द गरिएपछि गाउँमा खाद्यान्नको थप संकट भयो । अहिले भोकमरी नै हुने भएपछि तीन गाउँका बासिन्दाको बैठकले सदरमुकाम र सिंहदरबारको सरकारलाई गुहार्न वडाध्यक्षको नेतृत्वमा टोली नै पठाएको छ ।
‘खाद्यबाट पोहोर लिएको अलिकति चामल र उवाको सातु खाएर गाउँलेले केही समय गुजारा गरे । तर, त्यसपछि धान्न गाह्रो भयो । अहिले त भोकमरी नै हुने अवस्था आयो,’ शनिबार सदरमुकाम सिमकोट पुगेका नाम्खा गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आफ्ना नागरिकलाई खान नदिएर भोकै मार्छौ कि चामलको व्यवस्था गर्छौ भनेर सरकारलाई सोध्छौँ ।’गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न पनि उनीहरूले कम्ती सास्ती बेहोरेनन् । तीन फिट हिउँ जमेको न्यालुलेक पार गर्न कठिनाइ भएपछि टोलीका केही सदस्य दुई फिट हिउँ जमेको छेउको नारालेक हुँदै सदरमुकाम पुगेका छन् । ‘भोकभन्दा ठूलो केही नहुने रहेछ, हिउँले सेताम्मे पहाडमा बाटो कता हो भन्नेसमेत थाहा पाइँदैनथ्यो । ज्यान जोखिममा राखेर बाटो बनाउँदै पाँच दिन हिँडेर बल्लतल्ल सदरमुकाम आइपुग्यौँ,’ जाङका नुर्बु तामाङले भने ।
टोलीमा तीनै गाउँका ३० जना छन् । वडाध्यक्ष तामाङसहित तीन–चारजना हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामासँगै सिंहदरबारलाई पीडा सुनाउन काठमाडौं जाँदै छन् । सिमकोट पुगेका स्थानीय सिडिओ गणेश आचार्यको जवाफबाट थप निरास बनेका छन् । ‘सिडिओलाई भेटेर समस्या सुनायौँ । तर, उहाँ उल्टै दुःख सुनाउनुभयो,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘गाउँमा खाद्यान्नको समस्या रहेको थाहा पाएको छु, तर सदरमुकामस्थित डिपोमै चामल छैन, कहाँबाट पठाऊँ भनेर सुनाउनुभयो ।’ सिमकोटस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाम रित्तै रहेको जवाफ पाएको उनले बताए । डेढ सय घरधुरी रहेका यी तीन गाउँमा विगतमा खाद्य कम्पनीले हिल्सा नाका हुँदै चीनतर्फबाट खाद्यान्न ढुवानी गथ्र्यो । चीनबाट मैदा पनि आउँथ्यो । तर, कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएको हिल्सा नाका दुई वर्षसम्म खुलेको छैन । ‘पहिले चीनबाट मैदा पनि आउँथ्यो । अहिले बाटो बन्द भएकाले आएको छैन । आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन हुने आलु र उवाले तीन महिनाजति मात्रै पुग्छ । अहिले अन्न सकिएर ठूलो समस्या पर्‍यो,’ सिमकोट आएकी तिल गाउँकी छोइपुटी तामाङले भनिन् ।
चीनतर्फबाट खाद्यान्न आउन ठप्प भएपछि गत वर्ष सिमकोट खाद्य डिपोले गाउँपालिकाको याल्बाङ बिक्री केन्द्रमा तीन सय क्विन्टल चामल दिएको थियो । उक्त चामल गाउँपालिकाले १३ लाख खर्च गरेर ढुवानी गरेको थियो । उक्त चामल सकिएपछि संकट निम्तिएको वडाध्यक्ष तामाङले बताए ।उनका अनुसार करिब एक महिनाअघि चीनले हिल्सा र नाम्खा गाउँपालिकाका लागि चार हजार ६ सय ८० बोरा मैदा र आठ सय बोरा चामल सहयोग गरेको थियो । त्यसमध्ये एक हजार आठ सय ४६ बोरा मैदा र २० बोरा चामल तिल, जाङ र हल्जी गाउँमा पठाउने निर्णय नाम्खा गाउँपालिकाले गरेको थियो । तर, हिल्सा नाका पारिपट्टि आइपुगेको मैदा र चामल हिमपातका कारण नेपाल ल्याउन नसकिएको उनले बताए । ‘हल्दीमा ९६, जाङमा ३० र तिलमा २५ गरी डेढ सय घरधुरी छन् । गत वर्ष खाद्य संकट भएको समाचार नयाँ पत्रिकामै आएपछि खाद्यले तीन सय क्विन्टल दिएको थियो । उक्त चामल सकियो । उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले गाउँमा आलु र उवाबाहेक उत्पादन हुँदैन । त्यसले तीन महिना पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘चीनले दिएको सहयोगको मैदा र चामल पनि हिमपातका कारण ल्याउन सकिएको छैन ।’
सदरमुकाममा चामल पाइएन भनेर रित्तै गाउँ फर्किन सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् ।
किनभने गाउँलेले जसरी पनि चामल ल्याउन भनेका छन् । त्यसैले चामलको पहलका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं नै जाने निश्चित गरेका छन् । ‘जिल्लामा चामल छैन भनेपछि मैले प्रतिनिधिसभा सांसद छक्कबहादुर लामालाई फोन गरेँ । उहाँले भनिदिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले गृह मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतको नाममा सिफारिस बनाइदिनुभएको छ,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘तर, हामी मात्रै काठमाडौं गएर मन्त्री भेट्न के पाइएला र ? त्यहाँ कसले चिन्ला, कसले वास्ता गर्ला र ? त्यसैले माननीय (छक्कबहादुर)लाई नै अनुरोध गरेपछि सँगै जाने भन्नुभएको छ । भोलि (सोमबार) जाने कुरा भएको छ ।’ टोलीबाट को–को काठमाडौं जाने भनेर सल्लाह भइरहेको उनले बताए ।
-नयाँ पत्रिका वाट
Posted in breaking news 3, अन्तर्राष्ट्रिय, ताजा अपडेट
Prevम विदेशीन वाध्य छु
Nextसिन्धुपाल्चोकमा बोकेको बसमाथी…